M ga -enwe ike imelite Xiaomi m na MIUI 8? Pụọ na obi abụọ ebe a | Androidsis
July 11 ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ Xiaomi ga -ahapụ beta nke ọha nke mbụ MIUI 8; naanị otu ọnwa ka e mesịrị, na Ọgọst 16, a na -ahazi mmalite mbipụta mbụ kwụsiri ike. N'oge a, ihe ọtụtụ ndị ọrụ ga na -eche bụ ihe ọzọ karịa ma ha ga -enwe ike imelite ọdụ ụgbọ ha na ụdị sistemụ arụmọrụ ọhụrụ a.
Anyị na -alaghachi ikwu maka otu ụlọ ọrụ kacha amasị anyị, mgbe ọ bụghị nke kacha n'ime panorama gam akporo, Xiaomi. Na nke ugbu a anyị na -eme ya ka anyị gwa gị kedu ngwaọrụ ị kwalitere na MIUI 8.
Ọnụ Xiaomi Ha na -arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Google, gam akporo, agbanyeghị ụlọ ọrụ China na -ebipụta akwa nhazi ahaziri akpọrọ MIUI nke gụnyere ọtụtụ ndozi, ọkachasị n'ihe gbasara imewe, dị nso na iOS karịa gam akporo.
Edegharịrị MIUI n'ụdị nke asatọ yana nhọrọ dị ụtọ dị ka oyiri ngwa, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe Facebook abụọ, WhatsApp abụọ, Telegram abụọ ma ọ bụ abụọ nke ihe ọ bụla.
Ha na -egosipụtakwa atụmatụ ọhụrụ ndị ọzọ dị ka "Oghere nke Abụọ" ka ndị ọrụ abụọ nwee ike iji otu mbadamba ihe ahụ mana n'adabereghị.
Ma MIUI 8 gụnyere ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ anyị gwarala gị na Google.
N'ezie ị nwere nnukwu agụụ ịmalite ịnwale ya, ị nwere chi ọma, n'ihi na Xiaomi ọ ga -enye ohere imelite ngwaọrụ ndị karịrị afọ anọ. Ịtụnanya eziokwu? Ihe ọzọ kpatara anyị ji hụ ụlọ ọrụ a n'anya.
Na nkenke Ngwa Xiaomi niile ga -enwe ike imelite na MIUI 8, ka anyị hụ otu otu:
Xiaomi Mi Ntuba
Xiaomi Redmi Cheta
Xiaomi Redmi Rịba ama 2
Xiaomi Redmi Rịba ama 3 Pro
Ndị ọrụ nke Xiaomi Ha nọ na chi, dịka m kwuru, n'ụdị ndị ọzọ, ha anaghị ata ahụhụ otu ihe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » M ga-enwe ike imelite Xiaomi m na MIUI 8? Si na obi abụọ pụọ ebe a
Redungeon bụ nnukwu onye na-egwu ụgbọ mmiri ọhụrụ nke Nitrome